Koorsooyinka New DAT Prep
Qaybta I: Reviews Area Subject
Qaybta II: Review Laboratory
Qaybta III: AP Practice Biology Tests
[schema type="review" rev_name="CliffNotes AP Biology Review" author="Kip Nielsen" user_review="3" min_review="1" max_review="5" ]
Arday badan ee isku diyaarinaya qaybta Biology of DAT ee ay doortaan in ay la baran CliffsNotes AP Biology. Waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo Edition ku Saddexaad marka la isticmaalayo hage ku tiirsan tafsiir this sida ay tahay ka badan la xiriira macluumaadka ku daboolan DAT ah. Tan afraad Edition The more dhawaan ayaa la simay iyo waxaa loogu talagalay oo dheeraad ah xagga Imtixaanka Biology AP updated. edition Taas ayaa waxaa soo baxay qaar ka mid ah macluumaadka ka Edition Saddexaad loo baahan yahay DAT iyo sidoo kale waxa uu ku daray macluumaad dheeraad ah ee AP Baarista updated Biology aan khuseeya DAT ah.
Kanu waa buuggii u eegis loogu talagalay Baarista Biology AP a, Sidaa darteed dhamaan macluumaadka ku dhex jira ma aha khusayso in DAT ah. Haddaba waan tegi doonaa ka qayb kasta oo ka mid kitaabkii marayo iyo sharaxo waxa macluumaadka waxaa lagu daboolayaa.
hordhaca ah ee dabooli doonaa dib u eegida format imtixaanka AP iyo goolasha kaas oo la boodboodeen karaa. Waxaa jira xeelado imtixaanka-qaadashada qaar ka mid ah su'aalaha kala doorashada badan oo laga yaabo waxtar u DAT ah. Waxaa sidoo kale ka dhawaajiyey su'aalaha maqaalka ee imtixaanka AP ah oo aan loo baahan yahay in la ogaado. Ugu dambayn, waxa ku jira 14 mabaadi'da Biology kuwaas oo wanaagsan in la ogaado.
Qaybtani waxay daboolida 14 maadooyinka of Biology iyo waxaa ka mid ah dhaqanka su'aalaha iyo jawaabaha ee la soo gabagabeeyo maado kasta. Waxaa jira dulmari maado kasta oo bixiya guudmar cad ee mawduuca. The ah ereyada muhiimka ah iyo fikradaha la bolded doonaa maado kasta taas oo ka dhigaysa in ay u fududahay in ay iyaga garto oo la ogaado oo waxyaabaha waa muhiim in la ogaado oo dhan. Waxaa ku qoran toos ah, fududahay in la akhriyo format in uu yahay mid cad oo qeexan.
Waxaa jira images iyo jaantus buugga si aad u muujiso fikradaha oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan helay dhowr ka mid ah images iyo jaantus ay ka maqnaato si faahfaahsan. Iyagu way ka badan kartaa mid waxtar leh haddii ay ahaayeen faahfaahsan oo dheeraad ah. Waxaa kaloo jira dhowr fikradaha aan qabto wax images ama jaantus iyaga iyo in my opinion fikradaha, kuwaas oo ay noqon lahaayeen kuwa si fudud loo fahmi by ay ka mid yihiin sawirrada ah.
Su'aalaha dhamaadka maado kasta noqon doonaa su'aalo la doortay iyo maqaalka badan. Waxay waa in aad haddii aad doonayso in aad qabato su'aalaha maqaalka tan DAT kaliya ka kooban su'aalaha kala doorashada badan, laakiin kuwan waxaa laga yaabaa in ay faa'iido aad u tahay sida ay u tijaabin doonaa fahamka fikradaha Biology by samaynta aad loo farsameeyo macluumaadka aad baratay oo u sharax in format jawaab.
Qaybtani waxay ka kooban u eegis lagu sameeyo oo dhan 12 layliyo AP shaybaarka. dib u eegista shaybaarka waxay daboolaan doonaa qaar ka mid ah fikradaha oo laga yaabo inuu ka DAT, laakiin DAT uusan ka walaacsan la samaynaya tijaabooyin shaybaadh si qaybtan ma aha mid aad u faa'iido badan ee waxbarashada. waxbarashada waa in ay diiradda on the Reviews Area Subject kitaabka.
qaybta ugu dambaysa ee buugga ku jira laba imtixaan oo dhererkiisu buuxa in jilo imtixaanka AP dhabta ah. Waxaa sidoo kale jira jawaabaha iyo sharaxaad ee dhammaan su'aalaha. su'aalaha dhaqanka waxay noqon karaan kuwo waxtar leh si ay u tijaabiso fahamkaaga mid ah waxyaabaha la, si kastaba ha ahaatee, waa ka badan faa'iido u sameeyo dhaqanka su'aalo ayaa la formatted hab ah in DAT iyaga soo bandhigi doonaan. Kasta oo wax u eegis DAT gaar ah lahaa su'aalaha sida this.
Qarar Notes AP Biology waa hage u eegis weyn inay kaa caawiyaan inaad u diyaar garoobaan qaybta Biology of DAT ah. Waa cheap, la awoodi karo, laakiin sidoo kale si fiican u qoran si aan u soo jeedin lahaa sidii wax a in la isticmaalo waxbarashada Biology.
Waa arrin aad u Ogolow in barta, waxaa u akhriya sida encyclopedia ah. Waxaa ku jira oo dhan waxaad u baahan tahay in la ogaado si ay isugu diyaariyaan DAT ah. Ma aha sida sahlan loo akhriyi karo sida Barron ee Biology AP, ma waxay leeyihiin content sida ugu badan iyo sawirada, laakiin waa hage wax yar ka wanaagsan u eegis in aad u diyaar DAT ah.
Ardayda intooda badan waxay door bidaan CliffsNotes badan Barron ee Biology AP haddii aad leedahay si ay u soo qaado dhexeeya labada, sida aan samayn. Laakiin waxaan soo jeedin lahaa isticmaalaya labada Hanuuniyaa dib u eegis waxbarasho Biology aad. Waxaan baran lahaa ka CliffsNotes inta badan, laakiin sidoo kale samayn lahaa dhammaan imtixaan ee tijaabada ah iyo su'aalaha ku Barron ayaa sidoo jidka, oo fiiriyaa in Barron ayaa marka aad u baahan tahay caddaynta dheeraad ah wax. Sidoo kale, waa in aad isticmaasho Barron ee ku Geedaha iyo qaybaha Taxonomy halkii CliffsNotes sida qaybaha kuwan waxaa si fiican u sharxay in Barron ee. Sidaas kaa buuxin doonaa oo dhan dhimman macluumaadka aad u baahan tahay in la ogaado, waayo, qaybta Biology DAT. Waxay labaduba dib u eegis la awoodi karo hanuunin si aad u iibsato oo labadaba midba midka kale in ay ku filan si aad u diyaariso imtixaanka la dhamaystiro.
qalab kale oo waxbarasho si ay u isticmaalaan in lala soo CliffsNotes AP Biology dib u eegis guide waa CliffsNotes AP Biology Flashcards. Waxay yihiin gargaar waxbarasho weyn marka loo isticmaalo tusmo guide eegista AP. Waxaa jira 950 Kaararka print flash su'aasha / muddo hore ah iyo jawaabta on dambe ee card kasta. Waxay kala qaybsan yihiin mawduucyada la mawduuc kasta oo loo aqoonsaday madaxa kaarka. Waxaa dheeraad ah 50 Kaararka flash bannaan haddii aad jeclaan lahayd in la abuuro qaar ka mid ah u gaar ah.
Kaararka Flash ardayda la siiyo style a kala duwan ee waxbarashada kaas oo qaar ka mid ah door bidaan. Waxaa sidoo kale noqon lahayd waxtar leh si ay u isticmaalaan dib u fikradaha iyo jirrabaya fahamkaaga of Biology. Sida buugga, Kaararka flash kuwanu waa raqiis ah oo la awoodi karo.